सबै मानिसहरु सुन्दर हुँदैनन् । व्यक्तिहरु अलग–अलग रुप रंगका कारण चर्चित हुने गर्छन् । सुन्दरतालाइै लिएर केहि प्रतिस्पर्धा र अवार्ड शो हरु पनि हुने गरेका छन् । कोही यस्ता पनि हुन्छन् जसलाई विश्वकै सुन्दर मानिन्छन् । सुन्दर हुनलाई मोडलको जिरो फिगर हुनु पर्छ भन्ने पनि छैन् । कोही अजीबको शरीर भएमा त्यसैपनि चर्चामा रहन्छन् ।
प्राय विश्वभर मोडलहरु कुनै कारणले चर्चित हुन्छन् । आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौ मोडल अलेग्रा कोलको । ४७ वर्षकी यी मोडलले पहिला पियानो शिक्षक थिइन् । तर अहिले भने आफ्नो शरीरको कारणले लाखौ रुपैयाँ कमाइरहेकी छिन् ।
अलेग्राको अनुसार उनी आफैले जेसिका रैबिट जस्तो परेफेक्ट देखिन चाहान्थिन् । त्यसकारण पहिलो पटक सर्जरी गराउने निर्णय लिइन् र अझैपनि यसरी नै सर्जरी गराउने छिन् ।
उनले उपलब्धी हासिल गर्नलाई सर्जरीको सहारा लिएकी हुन् । अलेग्राले पटक पटक सर्जरी गराएकोले उनको ब्रेस्टको साइज ५४ इन्च भएको हो ।
उनले धेरै दुख भएपनि आफु खुशी भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । अलेग्राले ब्रेस्ट सर्जरी गरेपछि वर्षभरीमा केही शोमा भाग लिएर ६४ लाख सम्म कमाइ गरेको जानकारी दिएकी छिन् । एजेन्सी
साडीमा आकर्षक देखिन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अबलम्बन गर्नुहोस !
विवाहित महिलालाई यी ५ कुराको सधै पछुतो हुन्छ…
१३ महिनाको वर्ष मान्ने देश, जहाँ सन् २०१३ चलिरहेको छ
जिन्दगी दिन काट्नको लागी होईन, कुनै महान काम गर्नको लागी हो ।
केबल २ मिनेट समय दिएर पढ्नुहोस !